ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဆေးခန်း | CGH Hospital
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့်သောဘဝကို ခံစားလိုပါက ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အလွန်ပင်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် ရောဂါများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း နေ့စဉ်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာမှုများကို နားလည်ရန်လည်း အရေးကြီး သည်။ အချို့သောရောဂါများမှာ အစပိုင်းတွင် ရောဂါလက္ခဏာလုံးဝမပြဘဲ ရောဂါ၏အခြေအနေသည် ဆိုးရွားသောအဆင့်ရောက်မှသာ ရောဂါလက္ခဏာပြသောကြောင့် ရောဂါရှိသည်ကိုသိရှိသည့်အချိန်တွင် ထိရောက်စွာ ကုသရန် အလွန်ပင်နောက်ကျနေတတ်သည်။ အစောပိုင်းအဆင့်မှာ ရောဂါပြသာနာများကို သိရှိထားပါက ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုများကို စောစောစီးစီး ကုသနိုင်မည်မဟုတ်လား?
CGH ဆေးရုံရှိ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဆေးခန်းသည် အသက်အရွယ်မရွေး လူတိုင်းအတွက် နှစ်စဉ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု အစီအစဉ်များကို စီစဉ်ပေးထား ပြီး မည့်သည်အစိတ်အပိုင်းများ စစ်ဆေးရန် သင့်တော်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးစစ်မှုကဏ္ဍတွင် ကျွမ်းကျင်သောဆရာဝန်များက ရေးဆွဲပေးထားသော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ပတ့်ကေ့များဖြင့် နှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော စစ်ဆေးမှုများကို စစ်ဆေးရာတွင် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့်သင်ချစ်ရသူများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောရောဂါများစွာကို ကောင်းစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကြံဥာဏ်များပေးခြင်း
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆရာဝန်များမှ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း အသေးစိတ်စစ်ဆေးပေးခြင်း
အမျိုးမျိုးသော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်းမှ စစ်ဆေးခြင်း
အဆုတ် X-ray ရိုက်ခြင်း
သွားဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်သွားဆရာဝန်များက စစ်ဆေးပေးခြင်း
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည့်လူနာများကို သားဖွားမီးယပ် အထူးကုပညာရှင်များက စစ်ဆေးပေးခြင်း
မျက်စိကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်များက စစ်ဆေးပေးခြင်း
ကိုယ်ခန္ဓာစစ်ဆေးခန်းနှင့် ဌာနတစ်ခုစီအတွက် ဆွေးနွေးခန်းများ
နှလုံးစစ်ဆေးမှု နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းစိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်ခန်း
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသည့် ဆေးခန်းသည် CGH ဆေးရုံ၏ အဆောက်အဦးနံပါတ် ၁ ဒုတိယထပ်တွင် တည်ရှိသည်။
လူနာသစ်များသည် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဘိုကင်လုပ်ထားသော ဆေးစစ်ချိန်၏ မိနစ် ၃၀ မတိုင်မီလာရောက်၍ ပထမထပ်မှတ်ပုံတင်ဌာန၌ မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ရန်အတွက် သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ကို ယူဆောင်လာပါ။
ဆေးစစ်မှုမတိုင်မှီ အနည်းဆုံး ၁၂နာရီ အစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ (ဖြစ်နိုင်လျှင် စစ်ဆေးခြင်း မပြုမီအနည်းဆုံး ၂၄ နာရီ အရက်မသောက်ပါနှင့်) ။
စစ်ဆေးမှုကိုခံသောအမျိုးသမီးများအတွက်၊ ရာသီကာလ အနည်းဆုံး ၇ ရက်ကုန်လွန်ကြောင်း သေချာပါစေ။
စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သည့်နေ့တွင် မစင်နမူနာနှင့် ဆီးနမူနာကို ယူလိမ့်မည်။
အာထရာစောင်းရိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် သင်၏သွေးကို ယူပြီးသည့်အခါ သင်သောက်ရန်အတွက်ဆေးရုံက ရေကိုပြင်ဆင်ပေးမည်။ အာထရာစောင်းရိုက်ရန် စောင့်နေစဉ် ဆီးသွားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ရာ စိတ်ဖိစီးမှုစစ်ဆေးခြင်း (EST) ကို ပြုလုပ်လိုပါက လေ့ကျင့်ခန်းဖိနပ်ကို ယူဆောင်လာပါ။ သင်ဆေးဝါးတစ်ခုခုသောက်နေလျှင် သို့မဟုတ် ရင်ဘတ်နာခြင်းနှင့် အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းများရှိပါက ဆေးရုံ၀န်ထမ်းများကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင်လိုချင်လျှင် သို့မဟုတ် ရက်ချိန်းယူလိုပါက 02 552 8777 Ext 2213 ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
တည်နေရာ : CGH Main Building,2nd floor
ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန်များ : Daily 7.00 am - 4.00 pm
ဖုံး : +662 552 8777 ext. 2213 , 2214
ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန်များ : Daily 9.00 am - 4.00 pm
ဖုံး : +662 991 8999 ext.1247 , 1248